Rindrambaiko faktiora: Inona no tokony ho fantatrao momba izany | Avy amin'ny Linux
Rindrambaiko faktiora: inona no tokony ho fantatrao
La famoahana sy fanoratana ny faktiora Asa matetika eo amin'ny orinasa lehibe, SME ary koa ho an'ireo miasa tena. Ity asa ity dia mazàna tsy mahay mankasitraka ny mpitantana manao azy, ankoatry ny fanokanana fotoana manokana amin'ny asa hafa. Izany no mahatonga ny rindrambaiko faktiora afaka manampy betsaka azy rehetra.
Ary koa, toy ny olona rehetra, mety ho diso ianao amin'ny faktiora sasany. Midika izany fa tsy maintsy manao studs ianao, tandremo hatrany ny fanisana ny faktiora araho, araho raha voaloa na tsia, sns. Izany rehetra izany dia afaka mandeha ho azy na manalefaka ity rindrambaiko faktiora ity. Ary ny zava-drehetra tsotsotra toa ny fisintomana programa na fampiharana amin'ny solosainao PC na fitaovana finday ary manampy anao amin'ny enta-mavesatra mavesatra ...
1 Inona no atao hoe programa faktiora?
2 Karazana rindrambaiko faktiora
3 Fandaharana faktiora tsara indrindra
Inona no atao hoe programa faktiora?
Un rindrambaiko faktiora amin'ny ankapobeny dia programa solosaina izy io hitantanana sy hifehezana ny famoahana sy ny fahazoana ny faktiora ho an'ny entana sy / na serivisy. Izy io dia mety ho fitaovana tsara ho an'ny mpiasa tsy miankina na orinasa.
ny toetra izay tokony hananan'ny rindrambaiko faktiora rehetra dia:
Fahafahana ho an'ny isa azo ampifandraisina ny faktiora navoaka sy ny fitantanana daty.
Modely faktiora vonona vonona hameno.
Fampidirana ny logo sy data orinasa na miasa tena.
Mety hisafidianana hafa bola fomba.
Fahafahan'ny fitantanana rakitra an'ny mpanjifa sy mpamatsy. Miaraka amin'ny angona toa ny anarana, anaran'ny orinasa, NIF / CIF, adiresy, fifandraisana sns.
Tonian-dahatsoratra raha te hanova ny angon-drakitra a volavolan- ny faktiora alohan'ny fankatoavana azy.
Fifidianana karazana hetra (Hetra fidiram-bola manokana, VAT, ...) ary ny fahaizana manao kajy ny totaliny.
Dashboard misy sary misy an'izay fifandanjana amin'ny fandaniana sy ny vola miditra.
Rafitra an'ny Notifications amin'ny tranga sasany.
Fiasa hamoronana faktiora proforma sy teti-bola.
Amin'ny tranga sasany dia misy koa a database / agenda miaraka amin'ny mpanjifa sy ny angon-drakitra momba ny hetra hanamorana ny famoronana ny faktiora.
Karazana rindrambaiko faktiora
Ao anatin'ny rindrambaiko faktiora amin'ny stock na serivisy afaka mahita ianao samy hafa. Tokony ho fantatrao tsara izy ireo hahalala ny fomba hisafidianana tsara kokoa ny safidy mety aminao:
Online- Ireo dia programa fandefasana faktiora miorina amin'ny tranonkala izay tsy mila mametraka na inona na inona. Azo ampiasaina tsotra izao avy amin'ny fitaovana rehetra miaraka amina tranokala mirindra. Ny tombony azo amin'ireto rafitra ireto dia ny hoe ho avy foana izy ireo na aiza na aiza (raha miasa ny mpizara anao) ary tsy hiankina amin'ny fitaovana manokana ho azy ianao. Ho fanampin'izay, rehefa ao anaty rahona ianao, dia ho tahiry maharitra ny tahirin-kevitra, tsy mila miahiahy momba ny kopian'ny backup sns.
Local: ny rindrambaiko faktiora eo an-toerana dia napetraka amin'ny solo-sainao manokana na fitaovana finday. Na dia manana fiarovana tsara aza ny serivisy an-tserasera ary voahidy, ny sasany amin'ireo freaks fiarovana dia mety maniry ny hanana ny angon-drakitry ny mpanjifa rehetra eo an-toerana ho tsiambaratelo bebe kokoa. Io no hany tombony azon'ireto programa ireto. Ny ambiny dia fatiantoka raha oharina amin'ny Internet, satria raha misy zavatra mitranga amin'ny fitaovanao, hianjera ny kapila mafy ataonao dia voakasiky ny ransomware ianao sns, ary tsy manana kopia voafafa ianao dia mety ho very ny angon-drakitra ara-bola rehetra.
Ho fanampin'ireo sokajy ireo dia azo zaraina amin'ny karazany hafa izy ireo araky ny lafiny hafa. Ohatra, azonao atao ny manana rindrambaiko fakana faktiora maimaim-poana sy malalaka na loharano fananana, sns. Azontsika atao mihitsy aza ny manasaraka ireo karama omena karama na ireo izay afaka tanteraka. Amin'ny ankapobeny, tsy misy amin'ireo antony ireo no manatsara na manaratsy kokoa ny programa faktiora.
Izany hoe, misy rindrambaiko fakana loharanom-bola maimaim-poana kely fotsiny ny fialonana amin'ny loharano hafa voaloa sy mihidy ary ny mifamadika amin'izany. Noho izany, aza ampiasaina ho antony manara-penitra ireo antony ireo satria ny sasany milaza fa ny loharano misokatra dia ratsy kokoa noho ny fananana ... Fahadisoana lehibe izany!
Fandaharana faktiora tsara indrindra
Raha tianao izany tolo-kevitra vitsivitsy Momba ny rindrambaiko faktiora tsara indrindra azonao jerena, ity misy lisitra iray ahafahanao mahita ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra anananao:
InvoiceScripts: manome fahafaha-manao betsaka izy, satria mamela ny hametraka eo an-toerana amin'ny PC, mampiasa fampiantranoana tranonkala hampiantranoana ity fitaovana ity, ary koa eo ambanin'ny maodely SaaS ao anaty rahona avy amin'ireo mpizara azy manokana ho serivisy. Amin'ity tranga ity dia vahaolana rindrambaiko maimaimpoana io. Mahery izy io ary tsy mitsahatra mitombo noho ny fiaraha-monina sy ny plugins izay manampy asa vaovao. Ankoatry ny fitantanana faktiora, azo ampiana ihany koa ireo fiasa mba hanana CRM na ERP feno.
Factusol: DelSol Software dia namolavola ity rindrambaiko faktiora filanjana ara-dalàna ity mba hifehezana ny fitantanana ara-barotra rehetra an'ny orinasa, na ny varotra na ny fividianana natao. Azonao atao mihitsy aza ny mifehy ankoatr'izay noho ny fiasany amin'ny fifehezana ny tahiry sy ny tahiry vokatra. Ary koa, tsy maninona ny haben'ny orinasa na raha miasa tena ianao. Etsy ankilany, manana tombony lehibe hafa izy, ary izany dia ny fampidirany amin'ny suite MS Office. Maimaimpoana tanteraka izy io, saingy ho an'ny Windows ho an'ny fametrahana eo an-toerana ihany izy io, na dia azo ampiasaina an-tserasera aza izy io amin'ny alàlan'ny rafitra rehetra noho ny sehatra rahona.
Quipu: rindrambaiko faktiora tena tsotra sy mora ampiasaina manokana ho an'ny mpiasa tsy miankina sy SME. Io dia ahafahana mamorona faktiora manokana sy teti-bola, mampifanaraka ny fifanakalozana banky azo antoka, miteraka fandefasana vola, mandeha ho azy ny fampisehoana haba, sns. Izy io dia mampifandray ny asan'ny OCR hahafantarana ny lahatsoratra amin'ny fakantsary amin'ny findainao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy io ho an'ny fitaovana finday ao amin'ny Google Play for Android na hampiasaina amin'ny rahona.
mpitrosa: izy dia iray amin'ireo serivisy rahona malaza indrindra. Tsotra izany ary mamela anao hanao asa mahomby. Miaraka amin'ny maodelim-faktiora azo amboarina, ny haitao OCR hahafantarana ny soratra amin'ny fakantsary, ny tatitra ary ny mizana, sns. Amin'ity tranga ity dia voaloa izy io, miaraka amina drafitra fandoavam-bola fototra hatramin'ny 100 isan-taona ny antontan-taratasy € 4 / volana, drafitra antonony hatramin'ny 800 faktiora isan-taona mandritra ny € 12 / volana ary drafitra tsy voafetra ho an'ny € 24 / volana. Izy io koa dia manana rindrambaiko ho an'ny finday.
Contasimple: serivisy mifototra amin'ny tranonkala hamoaka sy hitantana ny faktiora anao haingana sy tsotra. Izy io dia manana modely, fiasa mandritra ny ora firaketana, famolavolana sary misy rakitsoratra, mamela ny fidirana amin'ireo mpitantana e-varotra toa an'i Prestashop, Shopify, Woocommerce, sns. Manana drafitra famandrihana an-tserasera marobe (na dia manana drafitra fototra voafetra maimaimpoana aza) sy fampiharana ho an'ny fitaovana finday.
Anfix: safidy hafa amin'ny teo aloha hampiasaina amin'ny fitantanana ny faktiaranao hahazoana fampiononana bebe kokoa. Izy io dia manana modely faktiora, asa mandeha ho azy, andiana rakitra hanehoana hetra, fitantanana kaonty, tetibola sns. Ny drafitry ny vidiny dia manomboka amin'ny € 10 ka hatramin'ny € 50 eo ho eo, miaraka amina serivisy mpanolotsaina raha tianao. Izy io dia manana fampiharana finday sy serivisy an-tserasera.
Sage One: Sage dia iray amin'ireo mpamorona fanta-daza amin'ny rindrambaiko fitantanana orinasa. Amin'ity tranga ity dia namorona fitaovana rindrambaiko faktiora tsara natao manokana ho an'ny mpiasa tsy miankina sy orinasa tsy miankina izy ireo. Hanana ny zavatra rehetra ilainao ianao amin'ny fitantanana ny faktioranao ary hividianana kisary hijerena ny sanganasa ary hahazoanao hevitra momba ny toetoetran'ny orinasa. Izy io dia manana fifandraisana banky mandeha ho azy amin'ny kaonty ny sarany sy ny fandaniana, ary koa ny fitantanana inventories, ny fahaizan'ny mpampiasa maro, sns. Eny tokoa, tsy serivisy maimaimpoana io. Manana drafitra € 7.5 sy € 15 isam-bolana miaraka amin'ny tolotra omeny azy (alohan'ny € 10 sy € 20 tsirairay avy). Etsy ankilany, manana fampiharana finday koa i Sage.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Rindrambaiko faktiora: inona no tokony ho fantatrao
Jorge de loquendo dia hoy izy:
Rindrambaiko maimaimpoana ve izy ireo? Aiza ny toeranao? Fahazoan-dàlana? Fonosana? Salama ity dia avy amin'ny Linux fa tsy Engadget miaraka amin'ny lahatsoratra dokambarotra
Mamaly an'i Jorge de loquendo
Taona maro lasa izay dia nampita ny orinasa tany Odoo izahay, ao amin'ny trano fitehirizan-trano Ubuntu. Maimaimpoana izany, na dia misy ekipa mpamatsy vola aza izay manome fikojakojana amin'ny vidiny mirary, dia nanakarama manokana izahay iray hanatanterahana ny fametrahana, fanaingoana / fampifanarahana ary fikojakojana. Ny marina dia tena faly izahay amin'ny fanovana, ny programa dia manana fahafaha-manao maro ary afaka manomboka amin'ny orinasa kely ka hatramin'ny orinasa lehibe. Mifantoka amin'ny tranokala izy io, izay nampiakatra manokana ny fisalasalako tamin'ny voalohany, raha vantany vao nesorina izy ireo. Ny tena nahagaga anay dia ny fampitahana amin'ny rindrambaiko tompona teo aloha, izay programa maimaimpoana betsaka na mihoatra miaraka amin'ny vidiny ambany raha ampitahaina.
Eto ny Lua 5.4 ary ireo no fiovana sy vaovaony